नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : शेर बहादुरको जिब्रोमा करेन्ट लगाइएकाले बोली प्रस्ट नभएको भन्ने कुरा पुरै झुट ! हेर्नुस प्रमाण सहित !
शेर बहादुरको जिब्रोमा करेन्ट लगाइएकाले बोली प्रस्ट नभएको भन्ने कुरा पुरै झुट ! हेर्नुस प्रमाण सहित !
अहिलेको प्रतिपक्षि दल अर्थात नेपालि कांग्रेशका सभापति शेरबहादुर देउवाको आवाज त्यति प्रष्ट हुने गर्दैन। उनले बोलेको नबुझिएर बेला बेलामा उनि आफुनै समस्यामा आउने गर्छन। केहि दिन पहिले राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले शेर बहादुरले बोलेको कुरा केहि नबुझिएको भन्दै मंच बाट नै खिल्ली उडाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।देशको राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बसेको मान्छेले त्यसरी सार्वजनिक स्थानमा कसै प्रति लक्षित रहेर खिल्ली र मजाक गर्न नहुने भन्दै कतिपय विश्लेषकले पनि राष्ट्रपतिको शैलीको बिरोध गर्दै आएका छन। हरेक मानिसमा केहि न केहि कमजोरी हुन्छ र कमजोरीको कसैले पनि मजाक गर्न हुँदैन भन्दै राष्ट्रपति जस्तो पदमा बसेको मान्छेले यो स्तरमा मजाक गर्न नहुने भन्दै पनि आएका छन कतिपय।
पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा पहिले भने एकदमै प्रष्ट बोल्ने रहेछन। पुरानो भाषण सुन्ने हो भने यो कुरा थाहा हुन्छ। जवकी २०६२/६३ सालमा देशमा परिवर्तन आउँदा पनि उनले काठमाण्डौको खुलामंचमा गरेको भासणमा उनको प्रष्ट बोलि रहेको छ। उनले त्यति बेला गरेको भाषण र किन शेरबहादुरको आवाजमा त्यस्तो समस्या आयो भन्ने बारे यो छोटो भिडियो पनि हेर्नुहोस।
Posted by www.Nepalmother.com at 1:41 PM